साउनदेखि मजदुरको तलब १५ हजार ! केके गर्दैछन् श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट ? – RadioMBC
Home > प्रशासन > साउनदेखि मजदुरको तलब १५ हजार ! केके गर्दैछन् श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट ?
२६ बैशाख २०७५, बुधबार १०:५०
२६ वैशाख, काठमाडौं । श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपालमा कार्यरत श्रमिकहरुको मासिक तलब बढाउने गृहकार्य थालेका छन् । हाल ९ हजार ७ सय रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक लिइरहेका श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ पुर्‍याउने श्रम मन्त्रालयको तयारी छ ।
माइ इन्भेस्टमेन्टका सञ्चालक गजमेर पुर्पक्षको लागि थुनामा